Dadkii ku guryo beelay dabkii qabsaday Kaamka Boqolka Buush oo xalay bannaan u hoyday. – Radio Daljir
Dadkii ku guryo beelay dabkii qabsaday Kaamka Boqolka Buush oo xalay bannaan u hoyday.
Boosaaso, Mar 27 ? Boqolaal qooys oo barkacayaal ah ayaa xalay meel bannaan u hoyday magaalada Boosaaso kaddib markii maalintii shalay ahayd cooshadihii ay degganaayeen dab xooggan oo qabsaday uu dhulka la simay.
Dadkaan oo u badnaa carruur iyo haweenka, ayaa shalay ku hooy iyo hanti beelay dab aad u baadweynaa oo qabsaday kaamkii ay degganaayeen oo lagu magacaabay jiray Boqolka-Buush, waxaana dabkaasi uu dhammaanba baabi?iyey guryihii buushasha iyo bacaha ka samaynaa ee ay dadkaasi deggayeen iyo hantidii u taallayba.
Dabkaan oo aan wali si rasmi ah loo xaqiijin sababta dhabta ah ee danbaysay kicitaankiisa, ayaa muddo saacado ah soconayey iyadoo si weyn looga dareemay Qaaca iyo Holaca dabkaasi dhammaanba xaafadaha kala duwan ee magaalada Boosaaso, mana jirto cid wax ku noqotay marka laga reebo hal qof oo holaca dabku dhaawacay kaasi oo sida la sheegay ka mid ahaa dadkii gurbadka halkaasi ku tagay.
Gurmad ballaaran oo ay soo sameeyeen maamulka gobolka Bari, midka degmada Boosaaso, laamaha dab-damiska Boosaaso iyo dadweynuhu oo ku saabsanaa sidii guryahaasi iyo hantidii dhaxtaallay loo badbaadin lahaa ayaan wax badani ka qabsoomin inkastoo wax uun lagu guulastay in la caymiyo.
Mas?uuliyiinta maamulka oo warbaahinta u warramay ayaa sheegay in ay gacan weyn ka gaysan doonaan sidii dadkaasi loo caawin lahaa iyadoo la isku dayayo in loo fidiyo taageero dhinacyo badan iskugu jirta, sida hooy, hanti iyo daryeel kale oo dhinac caafimaadka ah iyo nolosha ah.
Mas?uuliyiintu waxay dhanka kale shacabka reer Puntland gaar ahaan midka magaalada Boosaaso ay ugu baaqeen in loo gargaaro dadka masaakiinta ah ee hantidoodii iyo hooygoodiiba ku gubteen dabkii shalay ka kacay kaamka barakacayaasha ee Boqolka-buush.
Xaaladda nololeed ee dadkaasi barakacayaasha ah ee ku guryo beelay dabkii shalay ayaa ah mid aad u liidata, waxaana ay maamulka iyo dadweynahaba ka codsadeen in gargaar deg deg ah lala soo gaaro.
Maanta ayaa la filayaa gargaarkii ugu horreeyey ee dadkaasi loo fidiyo in uu si rasmi ah u gaaro halka dabku ka kacay, waxaana sidoo kale la filayaa hay?adaha sama-falku in ay goobtaasi gargaar mucaawimo geeyaan.
Ma?ahan markii ugu horraysay ee kaamka Boqolka-buusha dab noocaan oo kale ah ka kaco, waxaana inta badan dabkaasi loo aaneeyeen in uu ku yimaado dayac dadka deegaanka ka yimid.